ओक ब्यारेलको प्राविधिक सर्तहरूको बारेमा तपाईलाई कति थाहा छ? - उद्योग समाचार-गोआलोङ लिकर (समूह)
ओक ब्यारेलको प्राविधिक सर्तहरूको बारेमा तपाईलाई कति थाहा छ?
1. काठ समाप्त
वुड फिनिस भनेको व्हिस्कीको बुढ्यौली प्रक्रियाको क्रममा ओक ब्यारेलको अर्को नयाँ वर्गमा ब्यारेलमा आफ्नो बुढ्यौली समय बिताउने आत्मालाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो।सबैभन्दा सामान्य मामला बोरबोन ब्यारेलबाट शेरी ब्यारेलमा स्विच गर्नु हो, जुन सुकेको फल र मसलाको स्वाद बढाउन "सर्टकट" हो।
2. कास्क शक्ति
कास्क बल "मूल कास्क बल" हो, जसलाई मूल कास्क पनि भनिन्छ। यसले व्हिस्कीलाई बुझाउँछ जुन पानीमा पातलो नगरी ब्यारेलबाट सिधै बोतलमा राखिन्छ, र व्हिस्की प्रायः 55% र 60% बीचको हुन्छ। यो व्हिस्की मानिन्छ जुन मूल आसवनको वातावरणलाई राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ, अर्थात् सबैभन्दा मौलिक।
3. एकल कास्
एकल कास्क भनेको व्हिस्की एकल ओक ब्यारेलबाट आउँछ र मिश्रित हुँदैन। प्रत्येक पिपाको एक अद्वितीय व्यक्तित्व र सीमित क्षमता भएको कारण, एकल कास्क ह्विस्कीहरू प्रायः थोरै मात्रामा उत्पादन गरिन्छ र तुलनात्मक रूपमा महँगो हुन्छ।
4. भर्जिन ओक
भर्जिन ओकले ओक ब्यारेलहरूलाई बुझाउँछ जुन पहिले कहिल्यै स्पिरिटमा परेको थिएन, र नयाँ ओक ब्यारेलहरूको लागि खडा हुन्छ, अर्थात् पुरानो नभएको ब्यारेलहरू।
के तपाईलाई कुनै अन्य ओक ब्यारेल शब्दावली थाहा छ? तपाईं मलाई बताउन सक्नुहुन्छ ~
अघिल्लो: केही रोचक व्हिस्की कथा ---- टावरको कथा
अर्को: व्हिस्की कसरी भण्डारण गर्ने?